Moz Pro: Ka Faa'iidaysiga SEO | Martech Zone
Talaado, September 14, 2021 Talaado, September 14, 2021 Douglas Karr
Hagaajinta Mashiinka Raadinta (SEO) waa goob murugsan oo had iyo jeer soo kordhaysa. Arrimo ay ka mid yihiin is -beddelka algorithms -ka Google, isbeddellada cusub, iyo, ugu dambayn, saamaynta masiibada ee sida dadku u raadsadaan badeecadaha iyo adeegyada ayaa ka dhigaysa in qoditaanka hal xeelad SEO ay adag tahay. Ganacsatadu waxay ahayd inay si weyn u kordhiyaan joogitaankooda shabakadda si ay uga soo baxaan tartanka oo beerta fatahay ayaa dhibaato ku ah suuqleyda.
Iyada oo xalal badan oo SaaS ah ay jiraan, way adag tahay in la xusho oo la doorto kuwa u qalma iyo kuwa ku gubanaya godka jeebkaaga suuqgeynta. Ka faa'iideysiga istaraatiijiyada suuqgeynta ee internetka - iyo miisaaniyaddeeda - waa lagama maarmaan in lagu sii socdo. Iyada oo leh cabbirro badan iyo arrimo kala duwan oo la tixgelinayo marka suuqgeynta internetka, waxaa laga yaabaa inaad ku lumiso xogta iyo xad -dhaafka software -ka ku wacdiyaya xalal gaar ah.
Moz Pro waxaa lagu dhisay shaqooyin badan, fududeyn adeegsi, iyo tayada xogta maanka si looga caawiyo suuqgeeyayaasha inay kala shaandheeyaan xogta SEO ee adag iyo softiweerka si loo gaaro wax badan oo ka baxsan liisaska shabakaddaada, degellada, iyo miisaaniyadda.
Si Sahlan U Helitaanka Xogta Tayada
Backlinks -ku waa go'aamiyaha ugu fiican ee awoodda goobtaada. Waxay muujiyaan qiime iyo is -dhexgal waxayna ka caawin karaan websaydhkaaga inuu ka sarreeyo SERPs. A daraasadda ay samaysay Perficient ayaa dhawaan soo gabagabeeyay in Moz uu lahaa tusmada xogta ugu weyn ee xiriirinta, 90% ka badan tan labaad ee ugu weyn. Aaladaha aad adeegsato waxay si weyn u saamayn karaan guushaada SEO, iyo xog badan oo aad haysato ayaa ka sii fiican oo aad samayn kartaa.
Xiriirrada aaminka badan ee jira ayaa dib ugu tilmaamaya goobtaada, way u fududahay macaamiisha inay helaan. Moz Pro wuxuu si wax ku ool ah ugu qiimeeyaa boggag kasta boggiisa dambe boggaaga wuxuuna muujiyaa midka lagu hayo ama loo tuuro sidii spammy.
Waxa kale oo ay ku kala duwanaataa xirmooyinkaaga xiriiriyeyaashaada, oo ku tusaya xiriiro badan oo ka yimid aagag badan halkii ay ka noqon lahaayeen xiriirro soo noqnoqda mid. Kani waa cabbir ka awood badan xirfadleyda SEO maadaama ay siineyso matalaad sax ah joogitaanka webkaaga. Intaa waxaa sii dheer, cabbiraadaha lahaanshaha gaarka ah ee Moz ee Maamulka Domain iyo Maamulka Bogga ayaa gacan ka geysanaya cabbiridda xoogga degel kasta ama bog kasta iyo u ekaanshaha kuwa kale ee ku jira SERPs.
Xal All-in-One ah
Astaamaha Moz Pro waa kala duwan yihiin waana ballaaran yihiin. Interface -ka, si kastaba ha ahaatee, wuxuu u maareeyaa hawlaheeda badan naqshad fudud, habaysan.
Laba gujin ayaa ah waxa kaliya ee aad ugu baahan tahay asal ahaan dhibic kasta oo la xiriira SEO oo aad waligaa rabto. Bogagga bogga, koodhadhka xaaladda HTTP, cabbiraadaha isku-xidhka, calaamadeynta masawirka, dhib-furaha ereyga…
Logan Ray, Khabiirka Suuqgeynta Dijital ah ee Beacon
Naqshadda tab ee la heli karo waxaa loola jeedaa inay caawiso SEO kasta iyo takhasusle suuqgeyn, iyadoon loo eegin khibrad. Aaladaha sida Keyword Explorer ayaa gacmo-gacmeed ku shaqeeya hagaajinta bogga, oo muujinaya sida bogaggaagu ugu kala sarreeyaan tartamayaasha iyo halka aad ka xoojin karto darajooyinkaaga SERP.
Waxaad ka heli kartaa hubinta goobta, kobcinta ereyga muhiimka ah, qiimeynta, falanqaynta dhabarka iyo in ka badan, dhammaantood hal meel ah. Lahaanshaha hal codsi oo ah dhibaatooyin badan ayaa iska bixisa. Halkii aad ka isticmaali lahayd - sidaas ku iibsan lahayd - codsiyo kala duwan si aad u qabato shaqooyin kala duwan, waxaad ku badbaadin kartaa waqti iyo lacag xal dhammaystiran oo isku dhafan.
Soo bandhigida Horumarka Kooxdaada
Tirakoobyada iyo garaafyada qallafsan ayaa laga yaabaa inay waxtar u yeeshaan halyeeyadii SEO, laakiin xog aad u badan ayaa ku adag inta badan. Erayada muhiimka ah, Maamulka Domain, gurguurashada goobta, iyo in ka badan-u soo bandhigida SEO guul ama khasaaro shirkaddaada waa walaac, xitaa marka khubarada aan SEO ahayn ay fahmaan eray-bixinta. Moz Pro wuxuu u shaqeeyaa si uu u baabi'iyo xogta murugsan una fududeeyo in la fahmo sida xiriirintaada iyo mareegahaagu u fulinayaan tartanka.
Maaddaama shaqadaada suuq -geyntu ay ku lug leedahay soo bandhigidda natiijooyinkaaga, cilmi -baarista, iyo guuleysiga, Moz Pro waxaa ku jira barnaamijkeeda warbixinta gaarka ah.
Muujinta warbixinnada caadadu waxay na siisaa xogta aan u baahannahay si aan u qiilno mashaariicdayada iyo xeeladaha… waxayna u keentaa hufnaan weyn warshadeena.
Jason Nurmi, maareeyaha suuqgeynta ee Zillow
Iyada oo si cad loo xoojiyay, jaantusyada si fudud loo dheefshiido, iyo aalada kale ee muuqaalka ah, shaqada warbixinnada caadooyinka ee Moz Pro waxay u badan tahay inay gacan ka geysato gudbinta yoolalkaaga iyo baahiyahaaga si waxtar leh.
Moz wuxuu hormuud ka ahaa SEO inta lagu gudajiray isbadallada badan ee matoorada raadinta. Halyeeyadii hore iyo kuwa ku cusubba waxay si isku mid ah u heli doonaan shaqooyinkii ay doorbideen iyada oo loo marayo baakadaha iyo astaamaha Moz Pro ee kala duwan iyada oo la soconaysa isbeddellada cusub ee SEO iyo isbeddelada.
Bilaw Tijaabadaada Moz Pro ee Bilaashka ah
Tags: backlinksmaamulka domainkeywordsmoz procadarayna search engineSEOmadal seo